Puntland oo xirtay dhammaan xuduudaheeda iyadoo ay soo wajahantahay doorashada madaxweynaha - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo xirtay dhammaan xuduudaheeda iyadoo ay soo wajahantahay doorashada madaxweynaha
Kantarool kuyaala Puntland. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa xirtay dhammaan xuduudaheeda iyada oo ay soo wajahantahay doorashada madaxweynaha, sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliiska Janaraal Muxyadiin Axmed Muuse galabta oo Isniin ah.
Gudaha Garoowe, ammaanka ayaa aad loo adkeeyay iyada oo ciidamo badan la dhigay aaga xarunta baarlamaanka.
Dhammaan gaadiidka ayaa la joojin doonaa gudaha magaalada Garoowe marka laga reebo kuwa xildhibaanada, sida uu sheegay taliyuhu.
Maanta oo Isniin ah, musharixiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ayaa khudbadahooda ka hor jeediyay baarlamaanka.
Isniinta, 66 xubnood ee golaha baarlamaanka ayaa dooran madaxweynaha Puntland ee shanta sanno ee soo socota.
December 14, 2018 Halkee marayaa soo xulista baarlamaanka cusub ee Puntland?
December 29, 2018 Puntland waa maamul aysan u fududeyn in DFS ay farogelin ku sameyso: Falaanqeeye
December 20, 2018 Isimada Puntland oo kulan ku yeeshay Garoowe